Yakachipa Yakasimba Dhisiki Organic & Compound Fertilizer Granulator Muchina Iine Yakakwira Granulation Rate Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator?
Iyi nhevedzano ye granulating disc inoshongedzerwa nemiromo mitatu inobuda, inofambisa kuenderera kwekugadzira, inoderedza zvakanyanya kusimba kwevashandi uye kugadzirisa basa. Iyo yekudzora uye mota shandisa inoshanduka bhandi dhiraivhi kutanga zvakanaka, kudzora simba rekukanganisa uye nekuvandudza hupenyu hwebasa remidziyo. Hwendefa repasi rinosimbiswa nehuzhinji hwemaplate esimbi anopenya, ayo akasimba uye haana kumbobvira akaremara. Icho chiwanikwa chakanakira fetiraiza yemanyowa uye fetiraiza yemubatanidzwa, iyo yakagadzirirwa nehuremu hwakakora, hunorema uye hwakasimba, saka haina yakagadzika mabhaudhi echisimusi uye mashandiro akanaka.
Dhigirii regirazi rinogadziriswa kubva pa35 ° kusvika 50 °. Iyo pani inotenderera pane imwe kona neiyo yakatwasuka inotyairwa nemota kuburikidza nechokuderedza. Iyo poda inomuka pamwe nepoto inotenderera pasi pekupesana pakati peupfu nepani; kune rumwe rutivi, hupfu huchawa pasi pasi pemagetsi. Panguva imwecheteyo, hupfu hwacho hunosundidzirwa kumucheto kwepani nekuda kwesimba re centrifugal. Izvo zvinhu zvehupfu zvinomonera mune imwe trace pasi pemasimba matatu aya. Zvishoma nezvishoma inova saizi inodikanwa, yozopfachukira nemucheto wepani. Iine zvakanakira yakakwira granulating mwero, yunifomu granule, yakakwira simba, nyore mashandiro, iri nyore kugadzirisa, nezvimwe.
Maitiro Ekugadzirisa komputa fetiraiza Nekushandisa Disc Organic & Compound Fertilizer Granulator
1.Raw zvinhu zvinoshandiswa: Urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulphate, ammonium phosphate (monoammonium phosphate, diammonium phosphate, uye coarse whiting, ca), potasium chloride, potasium sulphate uye zvimwe zvigadzirwa zvakasanganiswa zvakaenzana (zvinoenderana kudiwa kwemusika uye ivhu rakatenderedza yemhedzisiro).
2.Raw zvinhu kusanganisa: Iko kusanganiswa kwezvisanganiswa kunofanirwa kusanganiswa kuvandudza yunifomu fetiraiza kushanda kweiyo granules.
3.Granulation yezvinhu zvakasvibirira: Iyo mbishi zvinhu mushure mekusanganisa zvakaenzana ichatumirwa kune granulator (muhombe dhiramu granulator, kana roll roll extrusion granulator zvese zvinogona kushandiswa pano).
4.Granulation kuomesa: isa iyo granulation mune yakaoma, uye hunyoro mune granules ichaomeswa, kuitira kuti iyo granulation simba iwedzere uye zviri nyore kuchengeta.
5.Granulation kutonhora: Mushure mekuomesa, iyo granulation tembiricha yakanyanya kukwirira uye iyo granulation iri nyore kutsva. Nepo mushure mekutonhora, zviri nyore kurongedza kuchengetedza uye kutakura.
6.Particle kupatsanura: iyo inotonhorera inodziya iyo yatonhodzwa ichave yakakamirwa
7.Finished firimu: Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakaputirwa kuti zviwedzere kupenya uye kutenderera kwemagirosa.
8.Packaging yechinhu chakapedzwa chigadzirwa: Izvo zvidimbu zvakaputirwa firimu zvinochengeterwa munzvimbo ine mweya.
Zvimiro zveDisc / pan Organic & Compound Fertilizer Granulator Machine
1. Kubudirira kwepamusoro. Iyo yakatenderera granulation muchina inotora iyo yese yakatenderera arc chimiro, iyo granulation chiyero inogona kusvika kupfuura 95%.
2.Pazasi peiyo granulation ndiro inosimbiswa nenhamba yemwaranzi simbi mahwendefa, ayo akasimba uye haana kumbobvira akaremara.
3. Granulator ndiro yakarongedzwa nesimba rakakura girazi simbi, anti-ngura uye yakasimba.
4. Iyo mbishi zvinhu zvine yakafara kushandiswa. Inogona kushandiswa kune granulation yezvakasiyana mbishi zvinhu, senge komputa fetiraiza, mushonga, kemikari indasitiri, chikafu, marasha, simbi.
5. Basa rakavimbika uye mutengo wakaderera. Simba remuchina idiki, uye mashandiro akavimbika; hapana tsvina inoyerera panguva yeiyo yose granulating maitiro, mashandiro akatsiga, uye kugadzirisa kuri nyore.
Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator Vhidhiyo Ratidza
Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator Model Sarudzo
Kureba kwemakona (mm)
Rotor Yekumhanyisa (r / min)
Pashure: Rotary Drum Komputa Fertilizer Granulator
Zvadaro: Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator
Nhanganyaya Chii chinonzi Industrial High Temperature Inokwezva Dhizaini Fani inoshandiswa? • Simba uye simba: Thermal simba chirimwa, Garbage kupisa moto chirimwa, Biomass peturu simba chirimwa, Maindasitiri tsvina kupisa kupora mudziyo. • Simbi yekunyungudika: Inovhuvhuta mweya weicherwa hupfu sintering (Sintering muchina), Furnace coke kugadzirwa (Furna ...